Degso Cheat Engine loogu talagalay Windows
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (3.30 MB)
Degso Cheat Engine,
Soodejiso Khiyaamada Khiyaamada
Khiyaanada Mashiinka waa barnaamij khiyaamo ciyaar xirfad leh oo loo soo saaray il furan, oo APK-kiisa sidoo kale loo isticmaali karo Windows 10-ka PC-yada aadka loo doonayo. Waxaad si toos ah u faragalin kartaa goobaha adag ee ciyaaruhu kulajiraan Khiyaanada Mashiinka, taas oo kuu ogolaaneysa inaad isbedel ku sameyso ciyaaraha aad ku maamusho nidaamka qalliinka Windows.
Tusaale ahaan, haddii cayaaraha aad ciyaareyso ay bilaabayaan inay si fudud kuugu soo dhowaadaan oo 100 dhibcaha nolosha ay kugu badan yihiin adiga, waad yareyn kartaa dhibcahaaga nolosha si aad isugu daydo naftaada, ama taa beddelkeeda, waxaad ciyaarta ka dhigi kartaa mid fudud.
Marka laga reebo kuwan oo dhan, waxaa suurtagal ah in la khiyaaneeyo xitaa ciyaaraha biraawsarka caanka ah iyadoo la kaashanayo aalado waxtar leh oo ku jira Khiyaanada Mashiinka. Xitaa waad hagaajin kartaa khaladaadka aad ku aragto cayaaraha adoo soo degsanaya Mashiinka Khiyaamada.
Waad ku mahadsan tahay muuqaalka sawirka scanner-ka ee barnaamijka, waxaad ku sameyn kartaa hagaajinta lagama maarmaanka ah ee liiska soo baxa ee ku saabsan goobaha aad ka beddeli karto ciyaarta aad dooratay.
Intaas waxaa sii dheer, barnaamijka waxaa ka mid ah khalad-sameeye, isku-duwaha, faafiyaha, xawaaraha, dhisaha tababaraha, Aaladda tooska ah ee 3D bixinta, qalabka xakamaynta nidaamka iyo qalab kale oo badan.
Waxaan u maleynayaa in dhamaan kuwa jecel ciyaarta ay tahay inay isku dayaan softiweerkan guuleysta, kaas oo kuu oggolaan doona inaad ku khiyaameyso ciyaaraha xirfad ahaan, ugu yaraan hal mar.
Fiiro gaar ah: fiiro gaar ah u siiya barnaamijka saddexaad ee software ee aad la kulmi doontid inta lagu jiro rakibidda barnaamijka.
Cheat Engine Noocyada
Cabirka Faylka: 3.30 MB
Horumar: Dark Byte